Racfaanada VRS ka | LawHelp Minnesota
Racfaanada VRS ka
Adeegyada Tababarada Xirfadaha (VRS) waxa ay leeyihiin nidaam racfaan qaadasho hadii aadan ku qanacsanayn go’aanka ay ka gaartay kiiskaaga. Hadii aad tahay codsade ama jaa aad horey u ahayd macmil waxa aad xaquuq u leedahay:
Inaad codsato dhexdhexaadin. Taa macnaheedu waa qof sedexaad oo dhexdhexaad ah inuu kala shaqeeyo adiga iyo VRS inaad heshiis gaartaan.
Inaad u soo bandhigto daliilo, akhbaar iyo makhraatiyaal mas’uulka aan eexda lahayn ee dacwooyinka qaada. Mas’uulkaasi waxa uu ka dib ka gaari go’aan kiiskaaga.
Ogaysiiska Xaquuqda Racfaanka
Waxaa khasab inaad ka hesho ogaysiis ku saabsan xaquudaada racfaanka hay’ada VRS.
Ogaysiisku waa inuu qornaadaa
Ogaysiisku waa inuu noqdaa qaabka aad jeceshahay in la adeegsado kolka lagula soo xiriirayo (af-ajnabi, farta Bariilka, iwm.)
Ogaysiisku waa inuu kuu sheegaa Barnaamijka Gargaarka Macmilka (CAP) sida (CAP) uu kaaga caawin karo racfaanka.
Waa khasab inaad hesho ogaysiiska xaquuqda racfaanka kolka:
aad codsato adeegyada VRS ka
qorshahaaga Shaqada (EP) la sameynayo
VRS ay qorshaynayso inay laasho, yareyso, ama joojiso adeegyada aad hesho.
Hadii VRS ay wax ka bedesho Qorshahaaga Shaqada aadna doonayso inaad racfaan ka qaadato taa, VRS waa khasab inay sii wado adeegyada xilliga dacwada racfaanku ay socoto. Adeegyadu waa inay sii socdaan ilaa iyo inta go’aan kama dambays ah laga gaarayo iyadoo la adeegsato dib u eegid ladifan, dhexdhexaadin, ama nidaam weyn oo dacwo qaadid ah. Laakiin adeegyadaasu ma sii socon doonaan hadii aad markii hore ku heshay musuq-maasuq, been sheegid, ama wax kale oo fal dambiyeed ah.
Noocyada Kale Duwan ee Racfaanada
Hadii aadan ku qanacsanayn go’aanka ay gaartay hay’ada VRS, waxaa jira qaabab kala duwan oo loo xalin karo dhibka. Qaababkaa kala duwan waxaa loo kala qaybiyey 3 nooc oo aasaasi ah:
dib u eegid ladifan oo uu kormeere sameeyo
hab dacwo qaadid oo aan eex lahayn oo dowga la raaco
Khasab kuguma aha inaad kuwaa sameyso si kastaba ha u kala horeeyaane. Tusaale ahaan, khasab kuguma aha inaad isticmaasho dib u eegida ladifan ee kormeeraha ama habka dhexdhexaadinta ka hor inta aadan codsan habka dacwo qaadida ee aan eexda lahayn ee dowga la raaco.
Dib u Eegida ladifan ee Kormeeraha
Hadii aadan ku qanacsanayn go’aan uu la taliyahaaga xirfadeyntu uu ka gaaray arrintaada, waxa aad codsan kartaa la taliyaha kormeerahiisu inuu dib u eego arrinta. Ku codso dib u eegida qoraal ahaan, ama adigoo xaadir ah, ama telefoon/TTY markii aad rabto.
Hadii aadan aqoon magaca ama ciwaanka kormeeraha, wac Xafiiska weyn ee Maamulka ee VRS ee St. Paul. Iyaga ayaa ku siin akhbaartan.
Agagaarka beledyada, ka wac 651-259-7366
Minnesota Dibada ah oo dhan, ka wac 1-800-328-9095
Kormeerahu arrintaada ayuu dib u eegaa ka diba waxa uu go’aansadaa in nidaamyada iyo xeerarka VRS sax ah loo waafajiyey arrintaada. Kormeerahu waxaa kale oo uu go’aansadaa hadii ay jiri karaan wax waanwaan ama xal ah oo dhibka wax ka qaban kara.
Dhexdhexaadintu waa qaab loo xaliyo khilaafaadka oo:
ka caawin kara adiga iyo shaqaalaha VRS inaad xalisaan khilaafkiina ku saabsan baahida iyo adeegyada
isticmaala, dhexdhexaadiye dhana aan raacsanayn si uu idiin ku hago xal cid walbaa ogolaan karto
Hay’ada VRS waa khasab inay bixiso wixii khidmad dhexdhexaadin ah ama kharashaad kale ah. Dhexdhexaadiyahu loo isticmaalo dhexdhexaadinta arrimaha tababarada xirfadeynta waxaa soo hela Xiriiriyaha Barnaamijka Dhexdhexaadinta arimaha Tababarada Xirfadeynta. Dhexdhexaadiyeyaashu waxa ay khibrad u leeyihiin dhexdhexaadinta waxay kaloo leeyihiin wuxuun aqoon ah oo ku saabsan arrimaha tababarada xirfadeynta. Ma aha iyagu shaqaale ka tirsan hay’ada VRS.
Labadiina mid adiga ama VRS ayaa codsan kara dhexdhexaadin. Dhexdhexaadintu waa akhtiyaar. Taa macnaheedu waa khasab in cid walbaa ogolaato si ay u dhacdo. Haddii labadiinuba, adiga iyo VRS aad ogolaataan adiga iyo VRS waxa aad saxiixaysaan foomka Codsiga dhexdhexaadinta waxa aadna u diraysaan Xafiiska Dhexdhexaadinta. Waxa aad ka heli kartaa foomka la taliyaha xirfadeynta ama Barnaamijka Gargaarka Macmilka (CAP). Wixii kale ee ku saabsan CAP, ka eeg bogga ugu dambeeya ee warqadan xogta aruursan.
Fadhi ayaa la qabtaa ka dibna dhexdhexaadiye ayaa la ma magacaabaa. Fadhiyada dhexdhexaadinta ah intooda badan waxaa la qaban karaa 15-20-cisho gudahood oo maalmaha shaqada ah, waxa ayna qaadan karaan maalin barkeed.
Waa aad u soo kaxaysan kartaa taakuleeye ama wakiil adigu dhaxdhexaadinta. VRS waa khasab inay keento qof awood u leh inuu go’aan gaari karo. Labada qoloba waxay sidoo kale keensan karaan dad og waxa aad u baahan tahay ama leh aqoon gaar ah oo ku saabsan arrimaha kiiska. Laakiin qolyahu waa khasab inay isku raacaan cidda imaan karta dhexdhexaadinta.
Dhexdhexaadintu waxa ay ku bilaabantaa si is-barasho. Ka dib, waxaa jiri fursad labada qolaba ay uga hadli karaan sida ay u arkaan arrimaha . Marka xigta, waxaa jiri doona falanqeyn ku saabsan xalka la heli karo. Hadii adiga iyo hay’ada VRS aad heshiis wada gaartaan, dhexdhexaadiyahu waxa uu kaa caawin adiga inaad qorto heshiiska cid walbaana nuqul ka hesho.
Hadii aydnaan heshiis gaarin waqtiga dhexdhexaadinta waxa aad isku dayi kartaa mid ka mid ah noocyada kale ee racfaanada ah.
Habka Qaadida Dacwada Dow marinta ee aan eexda lahayn
Hadii aadan ku qanacsanayn go’aanka ay ka gaartay hay’ada VRS arrintaada, waxa aad codsan kartaa habka qaadida dacwadaha dow marinta ah ee aan eexda lahayn. Tani waa sida dhagaysiga dacwada maxkamadaha oo kale, laakiin ma aha maxkamadeyn. Dhagaysiga dacwada waxaa qaada xaakim maamulka sharciga qaabilsan.
Qoraal ahaan ku waydiiso habka qaadida dacwada dow marinta ah ee aan eexda lahayn, 120-cisho gudahood laga bilaabo maalinta qoraal ahaan lagugu soo ogaysiiyo go’aanka la taliyaha. Warqadaada waa in lagu hagaajiyaa:
Dhagaysiga dacwada waa khasab in lagu qabto 60-cisho gudahood kolka aad codsado. Waxa aad xaq u leedahay inuu wakiil kaa noqdo taakuleye. Qareen ka socda xafiiska Xeer-Ilaaliyaha Guud ayaa wakiil ka noqonaya hay’ada VRS xilliga dhagaysiga dacwada.
Waxaad la imaan kartaa wixii akhbaar ah ama makhraatiyaal ah ee aad is leedahay waa ay caawin karaan arrintaada.
Dhagaysiga dacwada ka dib, xaakimka maamulku waxa uu soo saaraa go’aan qoran
Dib u eegida gudoomiyaha ee go’aanada hay’ada ALJ da: 20 -cisho gudahood ka dib kolka la soo saaro go’aanka qoraalka ah, labada qolo tii rabta ayaa waydiisan karta Gudoomiyaha Waaxda Shaqada iyo Dhaqaalaha ee Minnesota inuu dib u eego go’aanka. Waxaad kaloo soo diri kartaa akhbaar kale xilligan hadii aad is leedahay waxaa dhici karta inay caawiso arrintaada.
Gudoomiyahu ma uu burin karo go’aanka xaakimka maamulka aan ka ahayn inay jiraan “cadeymo shaki la’aan ah” oo ah in go’aanka ay “iska cadahay inuu khaldanaa (uusan qumanayn).” Gudoomiyahu isaga ayaa go’aanka kama dambaysta ah ku gaara 30-cisho gudahood laga bilaabo maalinta la codsado dib u eegida. Go’aanku waa inuu qornaadaa waana khasab inuu ku jiro warbixin buuxda oo ah xukunka iyo asbaabaha go’aanka.
Dib u eegida dacwada: labada qolo kii raba ayaa dacwo madani ka furi kara maxkamad gobol ama mid dowlada dhexe leedahay si ay dib ugu eegto go’aanka gudoomiyaha. Dacwada madaniga ah waa khasab in lagu xareysto 30-cisho gudahood kolka go’aanka kama dambaysta ah la soo saaro.
Waxaa fiican inaad si degdeg ah ugu hesho caawimaad dhanka sharciga ah dacwadahan oo kale. Waqtiyada xareysiga dacwadahan caynkaan ahi waa qariib.
Go’aanka kama dambaysta ah ee gudoomiyaha wali waa jiri inta dib u eegida dacwadu socoto. Taa macnaheedu waa adiga iyo VRS ba ma xareysan kartaan dacwo madani ah si aad uga hor tagtaan go’aanka kiiskaagu inuusan dhaqan gelin.
Mashruuca Gargaarka Macmilka (CAP)
Hadii aad tahay macmil ama codsade adeegyada hay’adaha VRS ama SSB, waxa aad wici kartaa Mashruuca Gargaarka Macmilka (CAP) si aad caawimaad uga hesho, hadii aad qabto su’aalo,walaac, ama ashtako ku saabsan adeegyada tababarada xirfadaha. Hay’ada (CAP) ma bixiso adeegyo tababaro xirfadeed ah oo toos ah, sida, tacliin, tababarid, ama qalab.
Eeg warqadayada xogta aruursan ee Client Assistance Project (CAP).
Wixii akhbaar ah ee kale ee ku saabsan (CAP) ama sida loo codsado adeegyada (CAP), ka wac:
(612) 334-5970 (agagaarka beledyada)
1-800-292-4150 (gobolka oo dhan)